အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ၀တ်ရုံတစ်ခုရဲ့ ရာဇ၀င်...
Posted by Pyiet Oo Aung at 11:11 PM
ညီလေးရေ ... အစ်ကိုကတော့ ဒီပို့စ် မတင်ခင်ကတည်းက ... ညီလေး လာပြကတည်းက တစ်ခါတည်း သိမ်းထားပြီးသား ... လေးစားပါတယ် ညီလေး ...
ရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ဗျာဒီဝတ်ရုံခြုံထားသူတွေ ညီလေးလိုဘဲအသိရှိမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေ တောင့်တနေတဲ့စည်ပင်သာယာဝပြောတဲ့အနာ ဂါတ်နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးဟာလက်တကမ်းမှာပါ။
really nice post and it can attract me with one sentence. Very meaningful and can touch the ppl's heart.
U make me to remember our general aung san......thanks for posting. carry on... i am looking forward to read more and more :)
ဖတ်ရတာ ရင်ထဲကို နင့်သွားတာပါပဲဗျာ။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဒီလိုပဲ ခံစားနေရတာပါ။
ကျနော်တို့ ဒီဝတ်ရုံကို နဂိုအတိုင်း မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပါ။ ၀တ်ရုံပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိနဲ့ ကျနော်တို့ နားလည်ပေးမှုတွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။
အင်မတန် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး ခံစားရတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ။ လေးစားပါတယ်အကို .. ။ ဒီလိုမျိုးအသိတွေ လူတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ကြပါစေ :)
သပြေခက်နဲ့ အပြုံးနဲ့ ကြိုဆိုတာ ခံရဖူးတဲ့ ဒီဝတ်ရုံရဲ့ သမိုင်းကို ထပ် မရိုင်းရအောင် ဒီဝတ်ရုံနဲ့ တန်တဲ့သူတွေ များများပေါ်ထွန်းပါစေ မတန်သူတွေ ဒီဝတ်ရုံကို စွန့်ခွာ ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရ ကောင်းမလား ???? တကယ်က ဆုမတောင်း တတ်ပါဘူး ဖြစ်စေချင်တာ ကို ဆုတောင်း အဖြစ် ပြောကြည့်တာပါ ၀တ်ရုံကို တကယ် လေးစားသူများ မတန်သူများကို ပယ် မထုတ် နိုင်ကြဘူးလား.. ပစ္စုပ္ပန်သန့်မှ အနာဂတ် ခန့်ထည်မယ်
၀တ်ရုံတခုရဲ့ ရာဇ၀င် .. လာဖတ်သွားတယ် ဘရို ..
ကဗျာထဲကလိုပဲ သက်တန့်စီးတဲ့ အနာဂတ်ကို အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ။
We waiting another post
လေးစားပါတယ်၊၊VERY VERY GOOD POST!!
ဒီဝတ်ရုံကို တစ်ခါတစ်ခါ လေးစားတယ်
တစ်ခါတစ်ခါ ရွံမုန်းတယ် နောက်ဆုံးတော့ ဒီဝတ်ရုံအပေါ်ခံစားချက်တွေ များလွန်းလို့အပေါ်ယံဝတ်ရုံကို မကြည့်တော့ဘူး ၀တ်ရုံခြုံသူကိုပဲ လူတစ်ယာက်အနေနဲ့မြင်လိုက်တာ ဒီလိုဆိုတော့လည်းအိုကေ သွားတာပါပဲ။
(ဒီပို့ စ်လေးကြားဖူးနေတာကြာပြီး အခုမှဖတ်ဖြစ်တယ် လေးစားတယ် အစ်ကိုရေ့ )
ဘလေ့ာ ၁ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကနေ
ဒီ ပို့စ်လေးကို လာဖတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ကောင်းကောင်းလေးတွေ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
လာလာ လည်နေပေမယ့် ခုမှဖတ်ဖြစ်ပါတယ် .. အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝလွန်းလို့ အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ် ..း) လေးစားပါတယ် ..း)
ညီ့မွေးနေ့ မတိုင်မှီလေးမှာ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိရင်း E-Card လေး ပို့မိရင်းက ညီနဲ့ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ် ဘာပဲ ပြောပြော ဝေးရပ်မြေခြားမှာ ရောက်နေသူချင်း အထီးကျန် သူခြင်း အမတွေ အကိုတွေ ရှိလို့ ညီ တွေ ညီမတွေ လိုချင်သူနဲ့ ညီမပဲ ရှိလို့ အကို တွေ အမတွေ ညီတွေ လိုချင်သူ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး လို့ပဲ ဆိုပါစေ တွေ့ဆုံ ခင်မင် ခဲ့ကြတယ် ညီရင်းအကိုလို ချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ် အခုတော့ လောကဓံ တရားအတိုင်း ခွဲခွာကြရတော့မယ်.. ဘယ်တော့များမှ အပြင်မှာ ပြန်တွေ့နိုင်ကြမယ် မသိ?? တွေ့ခဲ့ရင်ကော အခုလို အကိုကြီး တစ်ယောက်လို ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံနိုင်မလားးး ဆိုတာလဲ မသိ အားးး ထားပါကွာ ပြန်ဆုံချင်ပါတယ် ငါ့ညီလေးကို ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..။